Amathayili we-Metal Ceilings
Uhlaka lwe-2018 lwama-aluminium ensimbi lwakhiwe ibhokisi elifakiwe
Siyinhlangano eyingqayizivele emakethe, sizinikele ngokuzimisela ekuhlinzekeni uhlaka lwe-2018 aluminium yensimbi yensimbi enqanyuliwe. Uhlaka lwethu lwe-2018 aluminium ensimbi olwenziwe ngamapulangwe olumisiwe olwenziwe ngamabhokisi lufakwe ngokusekelwa kuphela ngokusebenzisa izinto eziphezulu zebanga kanye namathuluzi anamuhla ekuvumelaneni namazinga omakethe asethiwe. I-2018 uhlaka lwe-aluminium yokhuni lensimbi elimisiwe elifakwe ebhokisini likhona ...
I-2018 i-aluminium emisiwe ehlotshisiwe ehlelwe emathini ophahleni
Exhaswe ubuchwepheshe besizinda esicebile, sikwazi ukukhiqiza, ukuhlinzeka nokuhweba i-aluminum XMUMX ehlotshisiwe ehlelwe emathini ase-plailing. Eyenziwe ngobuchwepheshe, ukufakela kwenzelwa ithimba lethu labachwepheshe, eliphethe ulwazi olunzulu lalesi sizinda. Ngaphambi kokuthunyelwa kokugcina, sinikeze i-2018 i-aluminium emisiwe ehlotshisiwe ekhonjiwe etafuleni ihlolwe ngokucophelela iqembu ...
i-aluminium yangaphakathi evulekile
Sinikeza i-gamut ye-aluminium yangaphakathi evulekile iseluleli evuliwe njenge-aluminium plafond kanye ne-plank plailing eyenziwa njengamazinga embonini. Ekulungele kakhulu izicelo ezihlukahlukene zezimboni, ukufakwa kwe-aluminium yangaphakathi yesitfombe evulekile kulula ukuyifaka. Amaklayenti angasebenzisa uchungechunge lwethu lwe-variegated ngobukhulu obuhlukahlukene kanye nemibala ngokusekelwe ekuchazeni kwabo kanye nesidingo esithile. Njengesiqeshana ...
Amathayili we-Metal Ceilings/Vula i-Cell Metal Ceilings
I-2018 I-aluminium enefayili yensimbi efakwe ensimbi
Ukuze sihambisane nezidingo zamakhasimende ezingapheli, inkampani yethu inikeza ubuhle obuhle be-2018 Fashionable aluminium sheet sheet metal kuya amakhasimende ethu ahlonishwayo. Leli cebo le-2018 le-aluminium elisefesheni elifakwe enhlobonhlobo lensimbi liyadingeka ezibhedlela, ezitolo zokudlela, esakhiweni sehhovisi, eziteshini, ezitolo kanye namahhotela. Sinikeza lo mkhiqizo kumakhasimende ethu ahlonishwayo ngentengo enengqondo kakhulu. Thayipha: Ukufaka ...
i-aluminium emiswe phansi
i-aluminium eshicilelwe esilinganisweni enikeziwe iqukethe iqoqo elihle elitholakala ekuqedeni kwesimbi yesigaba esiphakeme kanye nemiklamo ethakazelisayo futhi ekhangayo eyenza lezi zinto zikhethwe kakhulu futhi zidinga emakethe. Ngaphezu kwalokho, iqoqo le-aluminium elinikeziwe elimisiwe lingabuye latholakala kithi ngokukhetha okuphelele kwezinto zokukhiqiza njengamanye amathekisthi akhulayo. Singahle senze isiko ...
Ukudonsa Kwama-Metal Ceilings/Amathayili we-Metal Ceilings
Isaphulelo esikhulu se-Discount se-spring siphuthumayo
Ngenxa yezifundiswa zethu ezidumile sikwazi ukunikela ngamavidiyo amakhulu, ama-malls njll. Lezi ziqeshana eziphuthumayo zokuphumula ezisempumalanga zisempumalanga ukuze zifake futhi zigcinwe futhi zimbozwe ngezingubo zokuvikela eziqinile kakhulu. Lezi zinshuwalense ezinkulu ezinkulu entwasahlobo ...
Isiqeshana se-Metal Ceilings/Amathayili we-Metal Ceilings
I-hook e-aluminium i-perforated plailing 129
Ukuze uhambisane nezidingo zamakhasimende ezingapheli, inkampani yethu inikeza uhla oluhle kakhulu lwe-Hook e-aluminium ekhonjiwe nge-129 kumakhasimende ethu ahloniphekile. Le Hook e-aluminium ekhishwe ngodaba 129 idinga izibhedlela, izitolo zokudlela, isakhiwo sehhovisi, iziteshi, izitolo namahhotela. Sinikeza lo mkhiqizo kumakhasimende ethu ahlonishwayo ngentengo eningi kakhulu. Thayipha: Ukufaka ...
I-2017 i-Aluminium isiqeshana esihlotshisiwe esiqongweni se-Faux umbala womuthi
Njengoba sibalwa njengenye yezinhlangano ezivelele, sihilelekile ekuhlinzekeni uhlaka lwe-2017 Aluminium ekhishwa ngepulangwe e-plailing nge-Faux wood colorQ. Lezi ziqeshana ze-2017 i-aluminium ekhishwe ngepulazini ngebala lomuthi we-Faux bayavuma ngenxa yokwakhiwa kwabo okunamandla, ubukhulu obuqondile nokusebenza kahle okuphezulu. Ngenxa yamandla ayo amakhulu nokuphila okusebenza isikhathi eside, lezi 2017 ...
I-2017 umklamo wegridi owenziwe ngekhanda weCanada
Sihlose ukubhekana nezidingo ezikhulayo zamakhasimende ethu ngokubanika isixazululo esinokwethenjelwa nesiphezulu se-2017 Fashionable yegridi yokudweba kweCanada. Ngokukhethekile eyenzelwe ukwanelisa izidingo zamaklayenti ethu, izixazululo zethu ze-2017 Fashionable grid design layout yeCanada ziyaziswa kakhulu emakethe. Sinikeza le nsizakalo ngentengo enhle emakethe ....
I-2017 i-aluminium yokuhlobisa i-square plailing tile
Sinikeza amaklayenti ethu ahlonishwayo ahlukahlukene we-2017 Aluminium yokuhlobisa i-tile yelitreyili eyisikwele eyakhiwa usebenzisa ikhwalithi enkulu ye-GI ne-aluminium. Ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi yayo, abaqambi bekhwalithi bethu bekhwalithi bahlola le nqubo kumingcele ehlukahlukene. Ngaphandle kwalokhu, sinikeza le nqubo ngokucaciswa okuhlukahlukene nokuklanywa ukuze kuhlangabezane nezidingo ezihlukahlukene ze ...
Insimbi ye-aluminium ye-2017 ibhebhethele uhlelo lokuwasha
Inhlangano yethu ibambe iqhaza ekwakhiweni nasekuhlinzekeni ububanzi bekhwalithi engcono kakhulu ye-2017 ensimbi yensimbi yensimbi ye-alfabhethi. Le zensimbi ze-2017 zensimbi ye-aluminium ziyizicabha ezisezingeni elihle futhi eziqinile kakhulu ezihlinzeka ngokusekela okukhulu kwi-wiring ehlukile kagesi kanye nokulungele ukugcinwa kwayo okulula nokuhlobisa ama-design. Insimbi yethu ye-2017 yensimbi ye-aluminium ishayela uhlelo lwamahala ...
I-2017 China isiqinisekiso sokuhweba kwe-aluminium ethuneni
Sihola umhlinzeki we-2017 China isiqiniseko sokuhweba kwe-aluminium ethengisa ukukhishwa okwenziwe ngensimbi yangempela ye-aluminium, efakwe kalula. Lezi zinkampani ze-2017 zase-China isiqiniseko sokuhweba kwe-aluminium ethengisa ama-bluetooth ziyatholakala ngamasayizi amaningana namaphethini njengokwenziwe kwamakhasimende ethu. I-2017 China isiqiniseko sokuhweba kwe-aluminium ceiling baffle is kabanzi kufakwe izakhiwo commercial, ezifana ...
Ukudayiswa okushisayo kwe-aluminium isikhumba sophahla
Siyinhlangano eyingqayizivele emakethe, sizinikele ngokuzimisela ekuhlinzekeni okungcono kakhulu ukuthengiswa kwe-Hot aluminium ukuvuleka kwendonga uphahla panel. Ukuthengiswa kwethu okushisiwe okukhishwa kwe-aluminium ophahleni ophahleni iphaneli iphaneli yenziwe kuphela ngokusetshenziswa kwezinto eziphezulu kanye namathuluzi anamuhla ekuvumelaneni namazinga emakethe asethiwe. Ukuthengiswa kwe-aluminium okushisayo okuphakelayo kwendlu
I-2017 Quality Aluminium Acoustic False Plailing Board
I-2017 Quality Assured Acoustic False Plailing Board inikezwa iqoqo elihle elitholakalayo ekugcineni kwesimbi yensimbi kanye nemiklamo ethakazelisayo futhi ekhangayo eyenza lezi zinto zikhethwe kakhulu futhi zidinga emakethe. Ngaphezu kwalokho, iqoqo le-2017 Quality Assured Aluminium Acoustic False Plailing Board lingasetshenziswa futhi lisetshenziswe ngokugcwele ...
I-2017 ilitshe elidayisayo elisendayo elibhekene nokulenga imidwebo ka-Christmas
Inhlangano yethu ibambe iqhaza ekwakhiweni nasekuhlinzekeni ububanzi bekhwalithi engcono kakhulu ye-2017 yokudayiswa kwendimbi yensimbi ekhanyekayo yokulenga i-christmas imihlobiso. Lezi zinhlobonhlobo ze-2017 ezithengisa ukushisa ezishisayo ezilenga ukuhlobisa izakhiwo ze-christmas zisezingeni eliphezulu kakhulu futhi eziqinile kakhulu ezihlinzeka ukwesekwa okukhulu ku-wiring ehlukahlukene kagesi kanye nokulungele ukugcinwa kwayo kalula nokuhleleka kwamehlo. I-2017 yethu yokushayela yensimbi eshisa kakhulu ilenga ...
I-4mm Mirror Qedela i-Acp For Design Shape Mirror Panel Aluminium
Inkampani yethu ihlonishwa kakhulu ekuhlinzekeni i-4mm Mirror Finish Acp yePlay Shape Mirror Aluminium Panel kula maklayenti. Sinikeza le nsizakalo emikhakheni ehlukahlukene, izindlu, nezakhiwo zokwakha nokukhiqiza ukufakwa kwamanga ngokusebenzisa i-gypsum ephezulu. Ngaphezu kwalokho, le XMUMXmm Mirror iqeda Acp For Work Design Shape Mirror Aluminium Umsebenzi wenziwa ngaphansi ...
I-2018 i-aluminium acoustic imiswe ngamapulangwe e-plailing
Ngesekelo labathengi bethu sinikeza amaklayenti ethu aqinisekisiwe ngekhwalithi ye-2018 Aluminium acoustic epholile ekhonjiwe ehambisana nekhwalithi efanelekayo kokubili izakhiwo zokuhweba nezokuhlala futhi zibe nezilinganiso ezinembile zokufakwa kalula. Lezi ziteshi ze-aluminum ze-2018 ze-aluminium ezimisiwe ezithengiswayo zithengwa kubathengisi abathembekile balo makethe ngaphansi kokuqapha kwezimpahla zethu zokuthenga. Ngaphandle kwe...
Isitsha esisha se-Metal Wood esitokisini esisekuqaleni
Ukufakwa okwesikhashana kusindiswe kusuka etafuleni eyinhloko nge-metal grids. Insimbi, noma insimbi engenasici, ama-panel asebenza kahle ngokufakwe okwesikhashana. Amapaneli ensimbi ngokuvamile afika ekugcineni okumhlophe. Isitsha esisha se-Metal Wood esitokisini esinezilimo ezikuvulekile sinikeza izinhlobo eziningi zemikhiqizo ephezulu ngokusebenzisa umugqa wayo omkhulu wendlela yokuklama nezinketho zokufaka amaTiles, (Faka ngaphakathi noKhukhunathi ku), noma ...
I-metal cell plailing, i-aluminium evulekile evulekile yeSiteshi sesitimela
Sisebenza kakhulu ekuhlinzekeni i-premium grade Metal cell ceiling, i-aluminium evulekile yokuvula isiteshi sesitimela. Umkhiqizo wethu owenzelwe umkhiqizo wenzelwe ngemuva kokucwaninga okukhulu nokuthuthukiswa ukuze ukwanelise izidingo zamakhasimende ethu aqakathekileko. Ukunikezwa kwethu nge-cell cell plailing, i-aluminium evulekile isiteshi seSitimela senziwa ngokusebenzisa izinto ezibonakalayo ezinhle kakhulu ngaphansi kokuqapha okukhulu kochwepheshe. I-Metal enikeziwe ...
I-Pvdf yokumboza i-aluminium yensimbi yensimbi yepaneli yodonga
Ekhuthazwe neqembu labachwepheshe abanolwazi oluhle kakhulu, sikwazi ukukhiqiza nokuhlinzeka nge-Pvdf yokugaya i-aluminium yensimbi yensimbi yodonga lwamapulangwe. I-Pvdf yokugaya i-aluminum yesikhumba se-aluminium yensimbi yepaneli yodonga ifunwa kabanzi kwizindiza zezindiza, izibhedlela, amahhotela, indawo yokubhuka, i-Metro Station, izindawo zomphakathi zomphakathi njll. Uhlobo: Amathayili okufaka indawo Indawo yokuqala: Jiangsu, China (Mainland) Igama lomkhiqizo: .. .
FONNOV, a subsidiary of CAIJING. A dynamic company based in China with business activities related to architectural and industrial materials industry. CAIJING is a shareholder of 3 main businesses on manufacturing ukufakwa kwensimbi nemiklamo, aluminium extrusions, kanye ne i-powder zokugqoka. I-FONNOV, njengesixhasi, isenzo sokuthengisa nokuthengisa kumabhizinisi angaphandle kwezwe.
Isiqeshana se-Metal Ceilings
Ukudonsa Kwama-Metal Ceilings
Ukwakhiwa kwezingqimba ze-Linear Strip
I-2017 yokuhlobisa i-W300 ibhilidi elibhekiselwe i-spandler
Izifakiwe ezincibilikisiwe zensimbi
Ukufakwa kwe-aluminium okwesikhashana okungenasindo
Isiqinisekiso sezebhizinisi 600 * Isiliva sensimbi se-600 sokwakha ihhovisi
Iphariziyamu enhle ye-aluminium e-perforated yokuhlobisa ngaphandle kwe-China
Iminyaka engu-10 Experience aluminium engenazibani elele iphaneli elingaphansi 2 'x 2' ne-SGS
I-copyright © Xuzhou Fonnov Architectural Materials Co., Ltd.